Tababbarka maaraynta waxqabadka iyo barashada ee 'Camei 2020' Camei Ele & Stationery
Tababbarka maaraynta waxqabadka iyo barashada Camei 2020
Si loo xoojiyo tayada qiimaynta waxqabadka ee dhammaan shaqaalaha shirkadda, iyo in si buuxda loo siiyo hagidda iyo dhiirrigelinta iyo xakamaynta qiimaynta waxqabadka, 28-kii Luulyo, shirkadda waxay abaabushay furitaanka qolka shirarka ee dabaqa 3-aad ee dhismaha xafiiska ee No. 3 Yuanxiang Street, Jiangnan High Park tech Industrial Park, Quanzhou City [2020 Tababarka Maareynta Waxqabadka iyo Barashada], in kabadan 20 maamulayaal sare iyo maareeyayaal sare oo ka socda Jamei Stationery ayaa ka qeyb qaatay tababarkan.
Tababarkan, wuxuu shirkadda ku casuumay Mr. He Huan iyo Mr. Chen Ping oo ka socda kooxda Beijing Changsong Group inay bixiyaan casharo. Muxaadarooyinka ayaa loo qabtay qaab "muxaadarooyin macalin iyo ciyaar fasalka ah". Fasalka dhexdiisa, labada macalin waxay falanqeeyeen oo sharaxeen hirgalinta ku filnaanshaha "bariis dheriga weyn", "sinaanta samafalka", iyo "yaan lagu qoslin" shirkadaha qaar.
Dadku waa shayga ugu weyn deegaanka ee shaqaalaha shirkada. Waxay ku fiican yihiin hagida iyo dhiirrigelinta, waxayna awoodaan inay ku tuuraan tamarta weyn ee ku qarsoon barafka hoostiisa. Ku sameynta qiimeynta iyada oo loo marayo qodobbada waxqabadka iyo soo koobid kooxeedyada 'data' ee xogeed waxay sii wanaajin kartaa awoodda kooxdu ku shaqeyso ee kooxda si heer sare ah.
Iyada oo loo marayo sheekada macallinka, qof walba wuxuu ka hadlay khibradda iyo waayo-aragnimada maanta, iyo sida loo isticmaalo shaqada xigta ee lagu horumarinayo kartida iyo wadajirka kooxda, iyo kor u qaadista horumarka shaqada kooxda.
Maanta, laba macallin oo ka socda kooxda Changsong ayaa si dulqaad leh wax u baraya. Waqtigan xaadirka ah, shirkadaha qaar waxay leeyihiin dhibaatooyin maareyn, sida qaab-dhismeedka mushaarka aan macquul aheyn oo ma jiraan habab wanaagsan oo qiimeynta waxqabadka. Tallaabada xigta, shirkaddu waxay sii horumarin doontaa qiimeynta, dhiirrigelinta iyo xakamaynta habka, xoojinta hirgelinta iyo fulinta natiijooyinka qiimeynta, waxayna si joogto ah u dardar gelineysaa horumarinta heerka maaraynta gudaha ee shirkadda si loo hubiyo in si guul leh lagu gaaro yoolalka shirkadda.
No.3 Yuanxiang St. Jiangnan New-Tech Tech Information Information Park Park Quanzhou362000, Fujian, Shiinaha
Maareynta waxqabadka maaraynta KIi 2020 ...